Fatigue Archives — UHAMBO LEE - OFFICIAL SITE
Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala Ukukhathala
Lapho Winners Bheka Like Losers
Yini abawinile ibukeke? Are they bude nofana ngobufitjhani? Mnyama noma mhlophe? Banamandla noma babuthakathaka? Ngicabanga ukuthi incike kulokho esikwazi wayesho ukuthini ngenkulumo “winner.”
Ngangikhuluma ukusivumela indaba elilodwa winner kwale nyanga odlule njengesinyathelo esifaneleyo funda omude, kodwa biography nebandakanyayo Michael Jordan. I-akhawunti okuningiliziwe kwangikhumbuza ukuthi kungani kukhathazeka abantu abaningi naye ngelanga ezicishe zibe ekukhulekeleni hero. Ziningi izinto kungathiwani “Airness yakhe” kodwa akekho oyoke abathi akuyena a winner. Ingabe ubheka like a winner phambi efika bonke labo izindandatho ubuqhawe, Nokho?
Njengoba ufunda le ncwadi, lapho kubonakala se- kusukela ebuntwaneni bakhe ukuthi wayeyoba iqhawe. Kungakhathaliseki ukuthi kwaba play lakhe eliyingqayizivele njengoba imbiza kancane phiko noma njengoba enyuvesi junior basketball player; yakhe spurt ukukhula esikoleni esiphakeme noma umdlalo wakhe yokuwina shot phakathi freshman wakhe iminyaka ngeminyaka, ephethe UNC.
By the time ngifika ezahlukweni mayelana Championships zakhe njengoba Bull Chicago, zazingekho lezimanga. Umbhali watshela indaba yakhe ngendlela ukuthi wakwenza kwacaca: Jordan wazalelwa ukuba abe winner. Futhi yilokho siyamazi for: ngokuwina eziyisithupha ubuqhawe izindandatho, MVPs ezinhlanu, futhi 14 All Star Ukubonakala…